| အဆိုပါ Mastery လိုငျစငျ နညျးပွ၏အပွညျပွညျဆိုငျရာအစညျးအရုံး
IAC ၏အလင်းပြခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်ကျွမ်းကျင်မှု (IAC Coaching Masteries)များကို ® အလင်းပြခြင်း ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၌အကောင်းဆုံးသောစံနှုန်းများအဖြစ် ကျယ်ပြန့်စွာသိရှိလက်ခံကြပါသည်။ သူတို့၏ လွတ်လပ်မှုများအားဖြင့် ရိုးရှင်းစနစ်ကျပြီး နည်းလမ်းမျိုးစုံကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် ဖန်တီးပုံဖော်ပေးထားခြင်း သည်ကားသူ၏ အလှတရားပေတည်း။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော အလင်းပြသူများ သာမက နုသစ်သောသူများပါ မိမိတို့၏ပညာရပ်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရယူနိုင်ရန် အတွက် ဤပညာရပ်ကျွမ်းကျင်မှု (Masteries)များဆီသို့ ဦးတည်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤကျွမ်းကျင်မှုပညာရပ်များကို ဘ၀နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရှု့ထောင့် အားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အလင်းပြသူများကိုမွေးထုတ်ပေးသော ကူညီသူဆရာသမားများ၊ သင်တန်းအစီအစဉ်များသည်လည်း ဤ IAC ၏အလင်းပြခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်ကျွမ်းကျင်မှု (IAC Coaching Masteries) များဆီသို့ ဦးတည်ပြီး ® မိမိတို့၏သင်တန်းသားများအား အသိအမှတ်ပြုလိုင်စင် ရရှိသူများဖြစ်လာစေရန်အတွက် မိမိတို့၏မစမှုနှင့် အရင်းအမြစ်များတိုးပွားစေရေး လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပေသည်။ ဤအခြေအနေက ထိုသို့ကူညီသူများ၊ ဆရာ/ဆရာမများအနေဖြင့် အလင်းပြသူများအား ® IAC ပညာရပ်ကျွမ်းကျင်မှုကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးသူ (IAC Masteries Practitioners) နှင့်® IAC အသိအမှတ်ပြုအလင်းပြသူ (IAC Certified Coach) များဖြစ်လာစေရေးအတွက် ဆက်လက်ရှေ့တိုးလျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သည့် အခွင့်အရေးများစွာကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
IAC အနေဖြင့် မည်သည့်အလင်းပြခြင်းသင်တန်း (သို့မဟုတ်) အလင်းပြသူကိုပျိုးထောင်ပေးသူများ အတွက်ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း၊ မြှင့်တင်ပေးခြင်း (သို့မဟုတ်)သိအမှတ်ပြုလက်မှတ် အပ်နှင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း သိမှတ်ရမည်။ ® ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် မည်သည့်အလင်းပြခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းအစီအစဉ်နှင့်မျှ မသက်ဆိုင် လွတ်လပ်သော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ရပ်တည်ရမည်ဟူသော IAC ၏အခြေခံမူဝါဒကို ဆန့်ကျင်နေပါသည်။ အမြင့်ဆုံးသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရယူနိုင်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက် လိုအပ်သည့်တရားဝင်မှုနှင့် အာဏာကိုထိန်းသိမ်းထားရန် အလွန်အရေးကြီးပေသည်။
IAC Coaching Masteries များကိုသင်ကြားပို့ချနိုင်မည့် အခွင့်ရသင်တန်းအစီအစဉ်များသို့ ၀င်ရောက် ရှာဖွေကြည့်ရှု့ပါ။®.
အခွင့်ရလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
IAC®ရဲ့ Mastery လိုငျစငျအစီအစဉျကိုထညျ့သှငျးရနျ, လကျရှိIAC®အဖှဲ့ဝငျကိုယျစားလှယျနှငျ့အတူIAC®အင်ျဂါဖွဈကွောငျးကိုအဘယျသူသညျနညျးပွလမျးညှနျအဖွဈနညျးပွလကေ့ငျြ့ရေးအဖှဲ့အစညြးမွားခှငျ့ အဆိုပါပိတျပငျနညျးပွMasteries® သူတို့ရဲ့စီးပှားဖွဈလမျးညှနျသို့မဟုတျလကေ့ငျြ့ရေးအစီအစဉျမြားသို့။ အဆိုပါ Mastery ဤ access ကိုနှငျ့အတူလိုငျစငျ certified ရရှိထားပွီးIAC®ဖွဈလာအတှကျ client မြားသို့မဟုတျကြောငျးသားမြားကိုကူညီမြားနှငျ့ထပျမံနညျးပွထူးခြှနျနှငျ့ကြှမျးကငျြပိုငျမွှငျ့တငျရနျသွဇာIAC®ရဲ့တိကခြိုငျမာစှာလကျမှတျဖွဈစဉျကိုပေးနိုငျသညျ။ အဖှဲ့ဝငျတဈဦးဖွဈခွငျးအပွငျ, ခပျသိမျးသောအာဏာလိုငျစငျ Mastery Practitioner ဖွဈကွပွီးတဈဦးကိုအတညျပွုကွ Mastery Professional ဖွံ့ ဖြိုးစေရေးအစီအစဉ်များ.
လိုငျစငျရှိပိတျပငျနညျးပွMasteries®၏ခေါငျးစဉျကိုလိုငျစငျ Authorized နှငျ့တဈခု embedded link ကိုအတူလိုဂိုခံယူခှငျ့ပွုထားပါသညျ
ဒါကွောငျ့တဈဦး Authorized လိုငျစငျဖွဈဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာရှငျးပွသောဝဘျစာမကျြနှာကို။ လိုငျစငျရှိအလားအလာ client နှငျ့ကြောငျးသားတှနေဲ့အတူမိမိတို့၏မွငျကှငျးပွုစုပြိုးထောငျ, IAC®ရဲ့ web site ကိုအပျေါတဈဦးပရျောဖကျရှငျနယျစာရငျးနှငျ့လငျ့ချရှိသညျ။ ကြှနျုပျတို့၏လိုငျစငျကြောငျးမြားနှငျ့လမျးညှနျနညျးပွကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျစှာ၏အောငျမွငျမှုအတှကျမိတျဖကျတနျဖိုးထားကွသညျ။ တနညျးကား, ကွောငျ့လကေ့ငျြ့ရေးလုပျငနျးစဉျ၏လုံးဝလှတျလပျသောကနျြရှိသညျ့လကျမှတျလုပျငနျးစဉျ၏လိုအပျခကျြကွောငျ့IAC®လိုငျစငျထောကျခံသို့မဟုတျအသိအမှတျပွုရနျအနအေထားမရှိ။
စီးပွားကိစ္စနှင့်ဆက်နွယ်သော လိုင်စင်အတွက် သဘောတူညီမှုအောက်၌ လိုင်စင်ရသူက IAC ၏ အလင်းပြခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုပညာ (IAC Coaching Masteries)ကို IAC ၏ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု(ဥပမာ- အလင်းပြသူဖြစ်သင်တန်း၊ သင်တန်း၏အသံပိုင်း သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံ ဗီဒီယိုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ၊ သင်ယူမှုအဖွဲ့များ စသည်) ၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် မပြောင်းလဲသောမူပိုင်ခွင့် သတိ ပေးချက်များဖြင့် ဖော်ပြရမည်။
လိုင်စင်ရသူလက်စွဲစာအုပ်ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ လိုင်စင်ရသူလက်စွဲစာအုပ်ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ (စပိန် )
IAC အနေဖြင့် အလင်းပြခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုပညာ(IAC Coaching Masteries)များ၏ တရားဝင် ဘာသာပြန်ဆိုထားသည်များကို တောင်းဆိုမှုအရ စီစဉ်ပေးပါမည်။ သီးခြားဘာသာပြန်ဆိုထားသော ဘာသာရပ်ရှိမနေပါက လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သူက IAC ထံမှတရားဝင် ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ရန် IAC သို့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီး IAC ၏နောက်ဆုံးသုံးသပ် အတည်ပြုမှုကိုရယူပြီးမှသာ ဖြန့်ဝေခြင်း ပြုရပါမည်။